मेरी बास्सैका बान्द्रेले टर्की फर्म चलाएर महिनामा कमाउछन् लाखौ - krishipost.com
गरे के हुँदैन र ? भन्ने उखानलाई मेरी बास्सैका बान्द्रेले साबित गरिदिएका छन् । बान्द्रेलाई नचिन्ने सायदै होलान् । उनै हास्य कलाकार बान्द्रे यतिबेला बट्टै तथा टर्कीको व्यावसाय गरिरहेका छन् । उनले यो व्यावसायमा करोडौंको लगानी लगाएका छन् । उनको फर्ममा १० हजार बट्टै रहेका छन् । सुरजको भनाई अनुसार एउटा बट्टै २ सयदेखि ३ सयसम्मको हुन्छ भने उक्त बट्टैलाई १ सय ३० रुपैयामा बिक्रि हुने गर्दछ । यो हिसाब अनुसार सुरजको फर्ममा १३ लाख बराबरको बट्टै मात्रै रहेको छ ।
त्यसैगरी उनको फर्ममा ५ सय भन्दा बढी टर्की रहेको छ । एउट टर्की १० देखि १२ किलोभन्दा बढीको हुँदो रहेछ । एउटा टर्की बेच्दा १२ देखि १४ हजारसम्म पर्ने रहेछ । सुरजको भनाई अनुसार उनको फर्ममा ६५ देखि ७० लाख बराबरको टर्की मात्रै रहेछ । यसका साथै सुरज अर्थात बान्द्रेले केही कुखुरा पनि पालेका छन् । पुर्ण रुपमा बट्टै तथा टर्की व्यावसायी बनेका सुरजले ती प्रजातिकालागी व्यवस्थित खोरको व्यवस्था गरेर यतिबेला आफ्नै व्यावसायमा ब्यस्त देखिन्छन् । फर्म खोल्ने योजना कसरी दिमागमा आयो ? अहिले व्यावसाय कस्तो भईरहेको छ भन्ने विषयमा सुरज भन्छन् :